Apple ကသင့်အားသတင်းများကို iTunes Spoken Editions | eReaders အားလုံး
Apple က သင့်သတင်းကို iTunes Spoken Editions ဖြင့် ဖတ်လိုပါသည်။
မကြာသေးမီကဆိုလျှင်ငါတို့ဘယ်လိုမြင်ကြသလဲ အခြေခံအကျဆုံးမှာတောင်သင့်အား ebooks နှင့် news များဖတ်ရန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်အခုတော့အလားတူအသံဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းဖို့ကြိုးစားနေ Apple က။ ဒီဝန်ဆောင်မှုကို iTunes နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးလက်ခံတယ် iTunes ပြောသော Editions ၏အမည်၎င်းသည် iPad နှင့်သာမက iPhone သို့မဟုတ် Macbook များနှင့်ပါအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အထူးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အက်ပဲလ်ရဲ့အကြံဥာဏ်ကဖောက်သည်တွေကို podcast ဒါမှမဟုတ် audiobook service ကိုကမ်းလှမ်းဖို့မဟုတ်ဘဲဒီပစ္စည်းတွေကိုနားထောင်ဖို့တစ်နေ့ကိုနာရီအခမဲ့မရှိတဲ့လူတွေကိုလုပ်ဖို့ပါ ငါသတင်းကိုကြားနိုင်လျှင်.
iTunes Spoken Editions သည် Times (သို့) Forbes ကဲ့သို့အရေးကြီးသောမီဒီယာများမှသတင်းများကိုဖော်ပြပေးမည်
ထို့ကြောင့် iTunes ပြောဆိုသော Editions မှသတင်းများကိုစုဆောင်းသည် အခြားသူများအကြား Times, Mic သို့မဟုတ် Forbes မဂ္ဂဇင်းအဖြစ်အဓိကမီဒီယာ။ သူတို့ကအစစာရွက်စာတမ်းစာအုပ်ကဲ့သို့သောအခြားအမျိုးအစားများကိုဖတ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်သူတို့၏အဓိကတာဝန်မဟုတ်ပါ။
ဒါပေမယ့်စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ဒီအသံထုတ်လွှင့်မှုအသံဟာစံပြဇာတ်ကြောင်းပြောရုံသာမကဉာဏ်ရည်တုအတုဖြစ်လိမ့်မယ်။ Amazon Echo ရဲ့ Alexa နဲ့ဆင်တူတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိပေမယ့်ဘယ်လိုလက်ထောက်မျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိသေးပါဘူး။ သို့သော် Siri သည် desktop စနစ်သို့ရောက်ရှိပါက၎င်းကိုစဉ်းစားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော Siri သည် iTunes Spoken Editions ၏ဇာတ်ကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်.
ဒါ့အပြင် Amazon Echo အတွက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်အကြောင်းကိုလည်းပြောနေပေမယ့်အတည်ပြုချက်မရသေးပါဘူး။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည် Amazon Echo နှင့် Alexa တို့တွင်သုံးစွဲသူများကိုပြိုင်ဘက်ကင်းသောပြိုင်ဘက်များရှိသည် အော်ဒီယိုစာအုပ်များနှင့်အသံလွှင့်ဌာနများအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခု။ ကောင်းပြီ၊ eReader ရှေ့မှာလူတိုင်းဖတ်ဖို့အချိန်မရဘူး မထင်ဘူးလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » Software များ » Apple က သင့်သတင်းကို iTunes Spoken Editions ဖြင့် ဖတ်လိုပါသည်။
နာမည်ကြီးစာရေးဆရာနှင့်သတင်းစာဆရာ Truman Capote ၏ပြာကိုဒေါ်လာ ၄၄၀၀၀ ဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်
Bouye T63 JDRead ကိုအောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်